रेखा थापाको नजरमा विप्लव, विवाहको हल्ला अनि करियर : के छन् याेजना ? - तितोपाटी
रेखा थापाको नजरमा विप्लव, विवाहको हल्ला अनि करियर : के छन् याेजना ?
– छैन, छैन । राजनीतिमा मलाई कुनै हतारो छैन । सिक्दै जाने हो । आफूले गर्ने राजनीतिमा मप्रति कसैबाट पनि औँला नउठोस् भन्ने रहेको छ । अर्काे इच्छा जनताको मत लिएरै माथि जानेछ । म युवा नै छु । कोमल दिदी मभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ । उहाँ सांसद हुनुभएको छ । खुसी छु । मैले धेरै सिक्न बाँकी छ । जनतासँग बुझ्न बाँकी छ । त्यो गर्दैछु । माथि जानेले जनताका लागि अहिलेसम्म के गर्न सकेका छन् र म हतारिनु पर्यो ? मेरा लागि त्यहाँ जानु ठूलो कुरो होइन । त्यहाँ पुगेर गर्ने एक्सन ठूलो कुरो हो । म त्यहाँभन्दा बाहिर बसेर पदबहाल व्यक्तिले भन्दा राम्रो काम जनताका लागि गरिरहेकी छु ।
March 23, 2021 12:53 pm | अन्तर्वार्ता, ट्रेन्डिङ, पत्रपत्रिका बाट, मनोरन्जन